Qodobada Sarah Williams ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Sarah Williams
Sarah Williams waa ganacsade fadhigeedu yahay Berlin, suuqgeynta khabiir ku ah xiriirka internetka. Fiiri bilowga ay ugu jeceshahay dijitaalka - Wingman Magazine - joornaalka qaab nololeedka internetka ee ragga.
Arbacada, Oktoobar 17, 2018 Arbacada, Oktoobar 17, 2018 Sarah Williams
Waxaa jirtay waqti haddii aad dhisi lahayd ay imaan lahaayeen. Laakiin intaas oo dhami waxay ahayd intuusan internetka si xad dhaaf ah uga dhergin nuxurka iyo buuq badan. Haddii aad dareentay jahwareer in waxyaabaha aad ka kooban tahay aysan sidii hore u socon, qaladka adiga ma lihid. Waxyaabaha hadda uun baa is beddelay. Maanta, haddii aad daryeesho ku filan oo ku saabsan dhagaystayaashaada iyo ganacsigaaga, gabi ahaanba waa inaad horumarisaa istiraatiijiyad aad ugu gudbiso waxyaabahaaga horay